KALSOONKA Klagenfurt Airport LOWK Austria FSX & P3D - Rikoooo
Halkan waxaa ah muuqaal qurux badan oo dhammaystiran oo garoonka diyaaradaha Klagenfurt ee Austria ah oo uu qoray Manfred Marbler, muuqaalka v5-ka waxaa ka mid ah dhir sawir-dhab ah, qaab-dhismeedka habeenkii, dallac xilliyeed, dhismeyaal 3D badan, dhismayaal aad u faahfaahsan iyo garoonka diyaaradaha. Add-on oo tayo sare leh qalabka dayactirka.
Airport Klagenfurt (ICAO: LOWK), sidoo kale loo yaqaan Airport Kaernten, waa garoonka diyaaradaha ee Klagenfurt, magaalada lixaad ee ugu weyn ee Austria. Waxay ku taalaa meel u dhow bartamaha magaalada ee Klagenfurt iyo u adeega qaar ka mid ah duulimaad ay firaaqada Yurub iyo dalal iyo nawaaxigeeda. Airport Klagenfurt ka kooban tahay mid ka mid ah dhismaha terminal rakaabka yar oo kasoo muuqday qaar ka mid ah dukaamada iyo makhaayadaha iyo sidoo kale ah kooxda martida Terrace.
dufan waxay bixisaa dhowr taribuunka for diyaaradaha bartamihii xajmi sida A320 Airbus iyo sidoo kale diyaaradda duulista guud yar. Sida aysan jirin buundooyinka jet, basaska waxaa loo isticmaalaa hoyga ah.